Askari ka tirsan Ciidamada Jabuuti oo lagu dilay Buulo Burde. – Xeernews24
Askari ka tirsan Ciidamada Jabuuti oo lagu dilay Buulo Burde.
19. April 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya toogasho maanta ka dhacday degmada Buulo Burde, kaasoo lagu dilay askari ka tirsan Ciidamada Jabuuti ee ka tirsan howl galka AMISOM.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in askariga lagu dilay badhamaha magaalada, goob lagu shaaho.
Wararka qaar ayaa intaa ku daraya in dhacdo ka horeysay dilka ay ka dhacday Suuqa Qaadka Buulo Burde, kaddib markii Haweeney Qaad ka ganacsata oo deyn ku laheyd askari Jabuutiyan ah ay shaadhka qabatay, iyadoo askariguna uu dharbaaxay haweeneyda.
Askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa ka cadhooday falkan, wuxuuna gacan ula tagay askarigii kale ee Jabuutiyaanka ahaa ee haweenayda dharbaaxay, waxaana intaas wixii ka dambeeyay ay sababtay xiisad soo kala dhex gashay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti.
Wararka kalee ayaa sheegaya in askariga Jabuutiyaanka ah la jidh dilay ka dibna u uu u yeedhay ciidamo kale, waxaana ay iyana jidh dileen askarigii ciidamada dawlada Soomaaliya ahaa ee horay u gacan qaaday askariga Jabuutiyaan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/04/djib-amisom.jpg 183 275 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-04-19 17:35:282017-04-19 17:35:28Askari ka tirsan Ciidamada Jabuuti oo lagu dilay Buulo Burde.
Magaalada Saylac oo yeelatay Maayeer Cusub iyo Maayeerkii Hora oo meel uu jaan... Xaaladi degmada saylac oo aan wali caga dhigan